डामर कपडा के हो र यसलाई कसरी राख्ने सजाउनुहोस्
खराब मौसम र चिसो को आगमन संग, धेरै घरहरू पूरै मौसम बाट ग्रस्त छन्। घरका केही अंशहरू छन् जस्तै टेरेसहरू वा आँगनहरू जो क्षतिग्रस्त हुन सक्दछन् किनभने वर्षाको र कम तापक्रमको हिउँदको कारण।
भर्खरका वर्षहरूमा घरको बाहिरी क्षेत्रहरूमा यस्तो भिजाई वा चुहावटबाट बच्न डाम फेब्रिक फेसनशील भएको छ। Se तपाईंको घर रक्षा गर्न एक प्रभावकारी र सरल तरीकाको साथ सम्झौता गर्दछ र कि तपाईं आफैंलाई कुनै समस्या बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
1 सामग्री डामर कपडा राख्नको लागि आवश्यक छ
2 डामर कपडा कसरी राख्ने?
3 एस्फाल्ट कपडा वर्ग
4 के डामर कपडा मर्मत गर्न सकिन्छ?
सामग्री डामर कपडा राख्नको लागि आवश्यक छ
सबै भन्दा पहिले तपाईलाई बिटुमिनस पेन्ट राख्न ब्रश चाहिन्छ र यसलाई कपडामा सामेल हुनुहोस्।
झाडू राम्रोसँग वितरण गर्न बिटुमिनस पेन्ट जुन तपाईं कपडाको प्लेसमेन्टमा प्रयोग गर्न लाग्नु भएको छ।
बिटुमिनस पेन्ट यसलाई डामर कपडामा गाँस्न।
डामर फेब्रिक कि यो कालो, एल्युमिनियम वा स्लेट हुन सक्छ।
एउटा मास्क र पन्जा जुन फेन्ट फेब्रिकमा राख्न प्रयोग गरिने छ विषाक्त छ।
एक टर्चलाई कपडालाई तातो दिन र त्यस तरीकाले यो पूर्ण रूपमा चिप्लिएको छ घर को भाग को लागी तपाइँ रक्षा गर्न चाहानुहुन्छ।
डामर कपडा कसरी राख्ने?
तपाईं फेब्रिकको प्लेसमेन्टमा जानु अघि, यो राम्रो छ कि तपाईं राम्रो सफाया गर्नका लागि क्षेत्र सफा गर्नुहोस् र हुन सक्ने सबै फोहोर हटाउनुहोस्।
त्यसो भए यो बिटुमिनस पेन्ट लागू गर्ने समय हो। यो र paint उत्तम छ किनकि यसले क्षेत्र राम्रोसँग सील गर्न र पानी वा चिसो यसलाई नोक्सानीबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। यो रंग प्रयोग गर्दा ठूलो ब्रश वा झाडू प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ। पेन्टसँग काम गर्दा मास्क र ग्लोभज लगाउन सम्झनुहोस्। यो निकै विषाक्त छ र हटाउन धेरै गाह्रो छ। सम्पूर्ण सतहमा फैलनुहोस् जुन तपाईं एक्लो गर्न वा सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ।
अर्को कुरा तपाईले गर्नु पर्छ डामर फेब्रिक। यो गर्न र एक पटक र dry्ग सुक्खा भएपछि, फेब्रिकमा लिनुहोस् र कपडाको टार भाग पेन्टको साथ सम्पर्कमा ल्याउनुहोस्। टर्च लिनुहोस् र तातो लागू गर्न सुरु गर्नुहोस् ताकि टार पग्लन्छ र पेन्टमा बाँधिन्छ। त्यसो भए, आफ्नो मुट्ठीको सहयोगमा, निश्चित गर्न ट्याप गर्नुहोस् कि कपडालाई सतहमा राम्रोसँग मिलाइएको छ।
यो सरल र सजिलो केहि छ ताकि तपाईं समस्या बिना यो गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि तपाईं एक पेशेवर लाई कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं मा कपडा राख्न। तपाईले उपचार गर्नुभएको क्षेत्रको राम्रो अन्त्यका लागि, तपाईं केहि टाईलहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
एस्फाल्ट कपडा वर्ग
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका डामर कपडा छन्, त्यसोभए तपाईले एउटा छनौट गर्नु पर्छ जुन तपाईको घरले उत्तम सूट गर्दछ र क्षेत्रमा तपाईं वाटरप्रूफ गर्न चाहानुहुन्छ।
स्लेट डामर कपडा सही हुन्छ जब यो घरको माथिल्लो क्षेत्रहरू जलरोधक गर्न आउँदछ। यी प्रकारका कपडाहरू पर्याप्त प्रतिरोधात्मक हुन्छन् र ठुलो रूपमा ओसिलो हुन्छन्। तपाईं यसलाई रातो वा कालो जस्तो विभिन्न र colorsहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
मार्केटमा तपाईले फेला पार्न सक्नुहुने डाम फेब्रिकको दोस्रो प्रकार कालो हो। घरको टेरेसहरू जस्ता ठाउँहरू छुट्ट्याउँदा यो प्रायः सबै भन्दा बढी मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। यस प्रकारको कपडाको मोटाई सही हुन्छ जब यो आउँछ सबै प्रकारको ओसिलोपना को रोकथाम गर्न।
अन्तिम प्रकारको डामर कपडा एल्युमिनियम हो र यो सूर्यको किरणबाट प्रश्न क्षेत्रको सुरक्षाको लागि उत्तम हो। यस प्रकारको कपडाको मुख्य सामग्री एल्युमिनियम हो र यो घर बाहिरका क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन धेरै व्यस्त छैन।
के डामर कपडा मर्मत गर्न सकिन्छ?
यदि तपाईं डाम कपडा मर्मत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक नली लिएर सुरू गर्नु पर्छ र त्यसमा भएका सबै फोहोर हटाउन सम्पूर्ण सतह राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्।
एकचोटि सफा गर्नुहोस्, तपाईंले बिग्रिएको र बिग्रिएको कपडाको भागहरू काट्नु पर्छ र हटाउनु पर्छ।
यस्तो हुन सक्छ कि कपडा सही स्थितिमा छ तर समयको साथ अनस्टकमा आयो। यस अवस्थामा, तपाईले के गर्नु पर्छ त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस् र यसलाई ठीक गर्नुहोस्।
जब तपाईं बिग्रिएको भागहरू हटाउनुहुन्छ, तपाईंले फेब्रिकको जोर्‍टहरू छाप्नु पर्छ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुक्न दिनुहोस्।
अर्को कुरा तपाइँले गर्न पर्छ कपडा मा एक सानो पानी संग एक तह लागू र सम्भाव्य असक्षमताहरूको साथ यो तरिका समाप्त गर्नुहोस्।
अन्तिम कपडा मर्मत समाप्त गर्न, सम्पूर्ण सतहमा मर्मत कोट लगाउनु हो।
डाम फेब्रिक एक उत्कृष्ट विकल्प हो जब यो आउँदो मौसमबाट तपाईंको घरलाई बचाउन आउँदछ वर्षा वा चिसो जस्तै। डामर कपडा एकदम प्रतिरोधी छ र तपाईको घरलाई वाटरप्रूफ गर्न समस्या बिना मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » डामर कपडा के हो र यसलाई कसरी राख्ने
आधुनिक भोजन कुर्सीहरू